အမွှာများသဖွယ်ဆင်တူလှပသော မြင်းပိုင်ရှင်မိန်းကလေးနဲ့သူမရဲ့မြင်း‌မလေး – One Daily Media
မြင်းတစ်ကောင် ပိုင်ဆိုင်ရခြင်းဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားများ ၊ စစ်မှန်သော သဘာဝအလှအပများ နှင့် ပျော်စရာအခိုက်အတန့်များ ကိုရရှိခံစားရစေပါတယ်။
Naomie ဆိုသူ လှပတဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးဟာ Storm လို့အမည်ရတဲ့မြင်းမလေးကို သူမလိုပင် လှပသော အသွင်အပြင်လေးဖြင့် ပြုစုပျိုးထောင်ထားခဲ့တာ‌ကြောင့် လူအများရဲ့ သဘောကျနှစ်ခြိုက်မှုကိုလဲ ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုချစ်စရာအတွဲအဖက်လေးကို သဘောမကျပဲမနေနိုင်တဲ့ ကျွန်ပ်တို့အဖွဲ့သားများဟာလည်း Naomie အား သွားရောက်အင်တာဗျူးဖြစ်ခဲ့ပြီး သူမ ပြောပြသည်များနှင့်တကွ ကြည်နူးစရာပုံရိပ်တချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
Naomie ဟာ ငယ်စဉ်ဘဝကတည်းကပင် မြင်းများကိုသဘောကျနှစ်ခြိုက်သူဖြစ်ပြီး တစ်နေ့မှာ ကိုယ်ပိုင်မြင်းတစ်ကောင် ပိုင်ဆိုင်လိုတဲ့အိပ်မက်ရှိခဲ့သူလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအခါမှာတော့ သူမအိပ်မက်တွေကို လက်တွေ့အကောင်ထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူမက Storm ကို ကြည့်ပီးတော့ “ကျွန်မ စမြင်မြင်ချင်းကတည်းက ချစ်မိသွားတာ။ ဒီလိုပိုင်ဆိုင်ရဖို့က ကျွန်မငယ်ငယ်လေးထဲက အမြဲစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေပဲ” လို့ ပြောပါတယ်။
Naomie ဟာအစပိုင်းမှာတော့ Strom ဟုခေါ်သော အမည်အပေါ် စိတ်မနှစ်မြို့မှုအချို့ရှိခဲ့သော်လည်းနောက်ပိုင်းမှာတော့ သူမကိုယ်တိုင်က ယခုလို မုန်တိုင်းဆန်သောနာမည်ကိုပဲ သဘောကျနှစ်ခြိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။
Storm အကြောင်းကို မေးတဲ့အခါ Naomie က “သူမကကျွန်မအတွက်တော့အရမ်းထူးခြားပါတယ်။ ကျွန်မတို့အတူရှိခဲ့ကြတာ အခုဆို (၅)နှစ်ရှိပါပြီ။သူမက အရမ်းယဉ်ပါးပြီး ချစ်စရာကောင်းပါတယ်။
သူမကစမတ်ကျပြီး ဘယ်လိုအခြေအနေမှာဖြစ်စေ ကျွန်မ Storm ကိုယုံကြည်လို့ရပါတယ်”လို့ပြောပါတယ်။ “သူမရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ လှပရှည်လျားတဲ့ လည်ဆံရှည်တွေကလဲ သူမကို အမြင်ဆန်းစေပါတယ်” လို့ Naomie ကဆက်ပြောပါသေးတယ်
။ ပုံများကိုကြည့်ရုံဖြင့်ပင် Storm နှင့်သူမ၏သခင် Naomie တို့အကြားနှောင်ကြိုးကိုမြင်သာစေနေပြီဖြစ်သည့်အပြင် Naomie ရဲ့စကားလုံးများက သူတို့နှစ်ဦးဟာအဖော်မွန်အစစ်တွေဖြစ်ကြောင်း‌ကိုပါ ဖော်ပြနေပါတယ်။
Naomie နဲ့သူမရဲ့ မြင်းမလေးတို့ဟာ အမွှာများသဖွယ်ဆင်တူသော ရွှေအိုရောင်ဆံပင်အရှည်များလဲ ရှိနေခြင်းကြောင့် လူအများရဲ့သတိပြုနှစ်ခြိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ယင်းတိုက်ဆိုင်မှုအကြောင်းကို Naomie က “ကျွန်မနဲ့ဆင်တူတဲ့မြင်းတစ်ကောင်ကို တမင်ရှာဝယ်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် မြင်းဝယ်ဖို့ရွေးချယ်ချိန်မှာတော့ ကျွန်မနဲ့တူတဲ့ Strom လေးကိုဝယ်ယူဖို့ပဲ ဆုံးဖြတ်ခဲ့မိပါတယ်” လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Naomie နှင့် Storm တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံများကိုကြည့်မည်ဆိုရင်လဲ သူမတို့နှစ်ဦးကြားက ကြီးမားသည့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ အသွင်အပြင်ဆင်တူဆင်တူနေမှုတို့ကို ရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံရိပ်များဟာ အလွန်ချစ်စရာကောင်းလွန်းလှသလို ဓာတ်ပုံရိုက်ရာမှာ Strom ရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးမှုဟာလည်း အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းကို Naomie က ” Storm ကအလွန်စိတ်ရှည်စွာ ဓါတ်ပုံရိုက်ခံပေးခဲ့ပြီးကင်မရာကလစ်သံကြားတာနဲ့ မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်အလား သရုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်” လို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
သူတို့နှစ်ဦးဟာ မတူညီတဲ့သဘာဝကြားတွေကြား ရှင်သန်ရင်းဖြင့်ပင် ပျော်ရွှင်စရာအချိန်တွေ ဖြတ်သန်းနေကြပါတယ်။အတူတူမြင်းစီးထွက်ရင်း ၊ အတူတူလမ်းလျှောက်ထွက်ကြရင်း ဖြင့်ပျော်စရာ ‌အကောင်းဆုံး အခိုက်အတန့်လေးတွေကိုလဲ ပိုင်ဆိုင်နေနိုင်ကြပါတယ်။
ဖော်ပြပါ Naomie ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးနဲ့သူမရဲ့မြင်းမလေး Stromတို့က သင့်ကိုရော စိတ်ကြည်နူးသဘောကျစေရဲ့လား?? သင့်မှာရော သင်ကိုယ်တိုင်မွေးထားတဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေ ရှိပါလား ?? သူတို့အပေါ် သင့်ထင်မြင်ချက်များကိုလဲ ရေးခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ။
Preview photo credit Priscilla Gijsberts / haflinger_storm_naomi / Instagram, Eliane van Schaik / haflinger_storm_naomi / Instagram
ဇာတ်ကောင်အတွက် သူတို့ရဲ့ပုံစံကို ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့တဲ့...
Automaticကားများအပေါ် မပြုလုပ်သင့်တဲ့ အချက် (၉)ချက်
ဓာတ်ပုံထဲက ကွယ်ဝှက်နေတဲ့အရာတွေကို (၁၀)စက္ကန့်အတွင်း...
ကမ္ဘာကြီးက သေးငယ်တဲ့ ဆန်းကြည်မှုတွေနဲ့...
သင် အသက်ရှင်နေတဲ့ကာလအတွင်း တကြိမ်တခါတော့...